Home Our Programmes Health Sector
မြိုင်ကြီးငူ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းသို့ ထူးဖောင်းဒေးရှင်း သွားရောက် လှူဒါန်းမည်
Friday, 26 May 2017 12:30
ထူးဖောင်ဒေးရှင်းနာယကဦးတေဇအား အမှူးထား၍ ဖောင်ဒေးရှင်း မတည်ငွေ ကျပ်(၂၅)သိန်း၊ ထူးကုမ္ပဏီများ အုပ်စု၏ လုပ်ငန်းစုများနှင့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများမှ စုပေါင်းလှူဒါန်းမှုတို့ဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ မြိုင်ကြီး ငူစစ်ဘေး ရှောင်စခန်းရှိ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအား တရက်စာ အဟာရဒါနနှင့် ဆန်အိတ် (၃၀၀)ကျော်ကို မနက်ဖြန် မေလ(၂၇)ရက် တွင် လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ထူးဖောင်ဒေးရှင်း၏ မတည်အလှူငွေအပြင် ထူးစီးပွားရေးယူနစ် များမှလည်း အလှူငွေ ကျပ်သိန်း (၅၀)ကျော်ပါ ၀င်လှူဒါန်းခဲ့သော ယခုလှူဒါန်းမှုကို ဆောင်ရွက်ရန် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ တာဝန်ရှိ သူများသည် ယနေ့ညနေတွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ မြိုင်ကြီးငူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းသို့ သွားရောက် ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြိုင်ကြီးငူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းရှိ ခိုလှုံသူ တိုင်းရင်းသား ပည်သူများအတွက် ပရဟိတ အဖွဲ့များ၏ လှူဒါန်းမှုများ ယခု နှစ်အစောပိုင်းက စတင်ပြီး တစစ နည်းပါးလာနေခဲ့ကြောင်း သတင်းများအရသိရှိရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးလာနေရာမှ ပြီးခဲ့သော ဧပြီလအရောက်တွင် အဆိုး ဆုံးအခြေအနေကို ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ရှိနေသည့် နေရာဒေသများတွင် သွားရောက်လှူဒါန်းမှု ပြုလုပ်လိုသည့် ထူးဖောင်ဒေးရှင်း၏ ရပ်တည် ချက်အတိုင်း ယခုမြိုင်ကြီးငူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကို သွားရောက် လှူဒါန်းရန် စီစဉ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထူးဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် အနာဂါတ်ကာလ တွင်လည်း ယခုလိုအမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ရှိ နေသည့် ဒေသများမှ ပြည်သူများအတွက် စွမ်းနိုင်သမျှ ကူညီလှူဒါန်း မှုပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ထူးဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဘိုကလေးမြို့နယ် ခုတင်(၁၀၀)ဆေးရုံတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော Ultrasound စက် (၁)လုံးနှင့် Diathermy စက် (၁)လုံးတို့ကို ၁၈.၈.၂၀၁၃ ရက်နေ့က သွားရောက်လှူ ဒါန်း ပေးခဲ့ပါသည်။
သီတဂူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသာသနာပြုအဖွဲ့နှင့် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းတို့မှပူးပေါင်း၍ ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုခရိုင်အတွင်း မျက်စိဝေဒနာရှင်များအား တတိယအကြိမ်မြောက်ဆေးကုသပေးခြင်းအစီအစဉ်ကို (၁၀.၇.၁၃) ရက်နေ့ မှ (၁၃.၇.၁၃) ရက်နေ့အထိ ပူတာအိုခရိုင်ဆေး ရုံတွင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများမှ ဆေးဝါးကုသရန်အခက်အခဲရှိသည့်
Htoo Foundation's Dispensary At Putao
Htoo Foundation has been donation much needed medicines such as malaria treatment medicine and snake bite antidotes and other medical assistance to villages across Putao region. A doctor was dispatched from Yangon to treat the patients and the required medicines and medical supplies were provided free of charge by Htoo Foundation. Htoo Foundation has been donation much needed medicines such as malaria treatment medicine and snake bite antidotes and other medical assistance to villages across Putao region.
ဒုတိယအကြိမ် သီတဂူ-ထူးဖောင်ဒေးရှင်း ကုသိုလ်ဖြစ်မျက်စိကုသပေးခြင်း
သီတဂူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓသာသနာပြုအဖွဲ့နှင့် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်း၍ ကုသိုလ်ဖြစ် မျက်စိကုသပေးခြင်း အစီအစဉ်ကို ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုခရိုင် အတွင်း တွင် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၁၈ရက်နေ့ အထိခရိုင်ဆေးရုံ တွင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ ပါသည်။ ပူတာအိုခရိုင်အတွင်းရပ်ကွက်ကျေးရွာ(၂၅) ရွာရှိ
သီတဂူနှင့် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်း၍ ပူတာအိုမြို့ရှိ မျက်စိဝေဒနာရှင်များအား အခမဲ့မျက်စိစမ်းသပ်ကုသမှု အစီအစဉ်
Donation of Overhead and Ground Water Tanks to Yangon Workers Hospital
Donation of medical assistance to villages